लाइन जाँदा टेलिफोन लगायत सवै सेवा अबरुद्ध
मे 26, 2019 मे 26, 2019 साइन्स इन्फोटेक	1 Comment	टेलिफोन, डा. राम बहादुर बोहरा
जेठ १२, नवलपरासी । नवलपरासी मध्येविन्दु नगरपालिका सुस्ता पुर्वमा लाइन जाने वित्तिकै नेटवर्क जान्छ । नेपाल टेलिकम सवैभन्दा धनाढ्य देखिन्छ । लाइनको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नखोज्नु वा भएर पनि केही नगर्नु कस्को लापरबाही हुन सक्छ ?
मध्येविन्दु नगरपालिकामा सवैभन्दा ठूलो समस्या नेटवर्कको देखिन थालेको छ । लाइन नहुदा फोन लगायत सवै सेवा अबरुद्ध भएको छ । यसतर्फ नगरपालिकाको ध्यान नपुग्नु दुर्भाग्य देखिन थालेको छ ।
हामीले सवैभन्दा महत्वपूर्ण कुरामा ध्यान दिन सकि रहेका छैनौं । नेटवर्क नहुँदा फोन सम्पर्क समेत टुटेको छ । फोनको कारणले गर्दा सुचना आदान-प्रदान हुन सकेको छैन । समयमै समस्याको सामधान हुन जरुरी छ । यो भन्दा पहिले पनि उहाँले यस विषयमा कुरा उठाउनु भएको थियो तर कसैको ध्यान जान सकेन ।
हाम्रो आवाज स्थानीय अधिकारी समक्ष नपुगेको भन्न मिल्दैन किनकि यो सवै मध्यविन्दुबासीको आम समस्या हुन पुगेको छ । यस्ता विषयमा ध्यान पुग्न जरूरी भइसकेको छ । सुचना पाउनु सबैको अधिकार हो । सुचनालाई दवाउने प्रयास भएको छ ।
पटक-पटक भनि रहदा पनि यसतर्फ कसैको ध्यान नपुग्नु दुर्भाग्य देखिन थालेको छ । समयमै ध्यान दिन नेपाल टेलिकमलाई हाम्रो आग्रह छ । यस्ता कमि कमजोरीतर्फ स्थानीय अधिकारीको पनि ध्यान नपुगेकाले पुगोस भन्ने हाम्रो आग्रह छ । पहिला सम्वन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएको समाचार पनि पढ्नुहोस् ।
बिजुलीको लाइन जाँदा पुरै नेपाल टेलिकमको सेवा अवरुद्ध, लापरबाही कसको ?
← थाहा पाइराखौ ! यी हुन् क्याल्सियम पाइने खानेकुराहरु
स्वास्थ्यको लागि केरा खानुका फाइदाहरु →
फ्रेवुअरी 28, 2019 फ्रेवुअरी 28, 2019 साइन्स इन्फोटेक	2
डिसेम्बर 21, 2018 साइन्स इन्फोटेक	0
One thought on “लाइन जाँदा टेलिफोन लगायत सवै सेवा अबरुद्ध”
Pingback:	नेपाल टेलिकमको यस्तोसम्म चरम लापरबाही